JOWHAR: Ganacsade Wareeggii koowaad ku guuleystay kursigii la isku qabtay ee Aqalka Sare - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Abiy Ahmed oo Guul ka sheegtay dagaalka iyo magaalooyin uu dib uga qabsaday Jabhadda Tigray
Abiy Ahmed oo kasoo hadlay Goobta Dagaalka. “Degaano badan ayaan TPF ka qabsanay, nafta ayaan hureynaa..”
Abiy Ahmed oo shaaciyey inuu la wareegayo hoggaaminta Ciidamada, Berrina tegayo Aagga dagaalka
Ciidamada Uganda oo dilay Wadaad Muslim ah iyo Dad badan oo loo xiray Qaraxyadii Kampala.
Maxay tahay digniinta hordhaca ah ee Mareykanku siiyey Diyaaradaha tegaya magaalada Addis Ababa?
Fal-celin weyn oo ka dhalatay Kaftankii Boqor BuurMadow ee Awoodda Beesha Dir & Dowladda Alshabaab
Farmaajo oo magacaabay Agaasimihii 8-aad ee Madaxtooyada Somaliya (Akhriso Liiska)
Buugga ‘Xog iyo Xusuusreeb’ ee uu qoray Wasiir Cabdi Canshuur oo Muqdisho lagu Daah furay
Haweenay ay Somaliland u xirtay Calanka Somaliya oo shaqo laga siiyey Wasaaradda Warfaafinta
Turkiga oo xiray Lammaane Yuhuud ah oo lagu eedeeyay Basaasida Qasri uu leeyahay Madaxweyne Erdogan
Midowga oo Go’aan Adag ka qaatay Doorashada s iyo RW Rooble (Akhriso War Culus)
Farmaajo oo u dhoofay Dalka Qatar iyo ujeedka socdaalkiisa oo la ogaaday
Maxaa kasoo baxay Kulankii RW Rooble iyo Midowga Musharixiinta? (Labada ballanqaad ee Rooble)
Guddiga K/Galbeed oo diiday Amarkii lagu joojiyey Doorashada Kursiga HOP103 ee laga hor istaagay Jawaari
Dagaalkii dheeraa ee Farmaajo u galay inaysan Dalka Doorasho ka dhicin (Qormo xusuus ah)
Adiga Dubo, Adiga lee Daangeeyso..! (Warkii Xeer ilaaliyaha Ciidamada iyo Qormada Xildhiban Aamina)
Casharradii laga bartay habkii Doorashada Aqalka Sare ay u maamuleen madaxda maamul-gobolleedyada
Jeneraal Aadan Abshir oo Qiil ay Dagaal ku qaadaan Ahlu-Suna siiyay DF & DGG (Qormo)
JOWHAR: Ganacsade Wareeggii koowaad ku guuleystay kursigii la isku qabtay ee Aqalka Sare
Ganacsade Xasan Iidow Muxumed ayaa ku guuleystay kursi ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fedderaalka, kaasoo laga soo doorto maamulka Hirshabeelle.
Wareegtii koowaad ee Doorashada waxaa ka tanaasulay senatoorkii ku fadhiyey kursiga oo isaga haray tartanka inta aanay doorashadu bilaaban, waxaana isugu soo haray Musharaxa Xasan Iidow Kobac iyo C/nuur Ibraahim Farey.
Natiijadii ayaa sidii la filayey noqotay inuu kursiga ku guuleysto Ganacsade Xasan Iidow oo si weyn loogu saadalaiyey, kadib markii la shegay inuu dhaqaale badan ku bixiyey hanashada kursigan.
Xasan Iidow ayaa helay codad aqlabiyad ah oo gaaraya 69 cod, halka C/nuur Farrey uu helay 22 cod, waxaan sidaasi kursigha ku guuleystay Ganacsade Xasan Iidow, sida uu ku dhawaaqay guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle.
Previous articleDoorashada Kursi ka mida Aqalka Sare oo ka bilaabtay Jowhar iyo Senatorkii oo ka haray tartanka
Next articleCabdi Xaashi & Mahdi Guuleed oo soo wada saray Habraaca Doorashada Aqalka Sare ee Somaliland (Akhriso)
Taliyaha Ciidamada Dhulka oo Qirtay in Kiisaska Ciidamada Milateriga lagu dhammeeyo Xeerjajab
Magaalada Boosaaso oo isu bedeshay Aag Ciidan (Akhriso Xaafadaha la kala joogo iyo Amar lagu soo rogay)
Booliska oo shaaciyey magacyada Eedeynayaasha dilay Walaallihii Sowda iyo Sakariye (Akhriso)
Nin Dhalinyaro ah oo u geeriyooday Rasaas ay ku fureen Ciidamada Dowladda iyo Askartii ka danbeysay..
DEGDEG: Dad loo qabtay Falkii lagu dilay Sowdo iyo Sakariye (Rasaas Caawa ka dhacday Muqdisho)
Booliska oo ka hadlay Cidda lagu tuhmay Kiiska Walaallaha Zakariye & Sowdo ee lagu dilay Muqdisho
Senator Cumar C/rashiid oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Su’aal aanu fileyn oo la weydiiyay
Ciidamo xiisad colaad ka abuuray Boosaaso oo ka baxay iyo hanjabaad ka timid Siciid Deni